TORITENY Alahady 11 Jona 2017 | FJKM Amboniloha
TORITENY Alahady 11 Jona 2017
Salamo 104 : 24 – 30 / Jaona 16 : 12 – 14 / I Jaona 4 : 1 – 3
Raha 200 taona no niasian’ny fanitsiam-pivavahana teto Madagasikara ; fiaraha- monina manao ahoana no tokony hita eto amin’ny firenena ?
Vanim-potoanan’ny Mpaminany, Vanim-potoanan’I Jesoa Kristy, efa nolalovana avokoa, fa ankehitriny kosa vanim-potoanan’ny Fanahy Masina ; manao ahoana ny fijoroan’ny Kristiana amin’ny sehatra rehetra misy azy tsirairay? Efa tena nandray ny fanahy Masina ve ? ary efa azo hiotazana ny vokatry ny Fanahy ve ? vakio Gal 5 : 22-24
“Fa raha tonga ny Fanahin’ny fahamarinana, dia Izy no hitari-dàlana anareo ho amin’ny marina rehetra…” (Jao. 16: 13a).
1- Mizara fiainana Andriamanitra ary asehony amin’ny famoronana izany.
Tany am-piandohana, raha nahary izao tontolo izao Andriamanitra dia ny filaminana sy fiadanana ho an’ ny olombelona no tanjony, Izy no mifehy ny zava – boahary rehetra. Ny zavatra hita nefa dia mikorontana ny tany, tondra-drano, hain-tany, fahapotehana sns… sanatria ve tsy voafehin’Andriamanitra ny asan’ny tanany ? Tsia, fa ny olombelona no mila mandini-tena, nantsoiny ho mpiara-miasa Aminy aho mba hitandrina ny zava-boahary, tena vitako ve ny andraikitra napetraka tamiko ? Tena manaja sy mankato ny asa ampanaoviny ve aho? Dia ny fanarahana sy fitandremana tsara ny torolalana omeny ao anatin’ny Soratra Masina. Ho an’ny Kristiana, matetika dia ny Alahady na mandritry ny fotoam-bavaka ihany no manana fifandraisana akaiky amin’Andriamanitra, fa ny ivelan’izay kosa hadinony izany ; ka dia manao izay tiany hitondran’ny saina sy ny filàny azy avy izy.
Vokatr’izany dia mikorontana ny fiaraha-monina .Ohatra, ny “Fitsaram-bahoaka” izay toa voizina ankehitriny ny fampiharana azy ; dia tsy ankasitrahan’Andriamanitra kanefa dia misy ny Kristiana mandray anjara amin’ireny. An’Andriamanitra ny aina koa tsy anjarantsika ny mamono olona. Natao hizara fiainana amin’ny manodidina isika. Izany no marina itarihan’ny Fanahy Masina antsika.
2- Isika olombelona no harenan’Andriamanitra
Fahamarinana itarihan’ny Fanahy Masina antsika dia ny hoe ny tena harena eo amin’ny firenena iray dia ny olombelona. Ny tsy fahaizan’ny olombelona mitantana izay fananana atolotr’Andriamanitra azy no mampahantra azy. Raha ny fitiava-namana no ampanjakaina dia mahay mifampizara izay ananany ny tsirairay ka ho feno fiadanana ny mpiara-monina satria samy mahazo ny anjara tandrify hahasoa azy. Ny mifanohitra ami’izany kosa no fomba fijery sy itantanan’ny olombelona azy ankehitriny , volamena , hazo sarobidy , sns… ireny no imatimatesana havadika ho vola ka mitady ny fomba rehetra hanangonana izany ho fananan’olon-tokana.
Vokany : mifanimba sy mifamono , ny samy olombelona , voahosihosy ny hasarobidin’ny aina izay nomen’Andriamanitra mba hitadiavana sy hampitomboana ny vola aman-karena eo am-pelan-tananana na kely io na be. Ho laniana amin’ny inona nefa? amin’ny filàna sy ny zavatra mandalo ihany eto amin’izao tontolo izao, satria mihevitra aho fa ny fananana vola aman-karena no antoka ahazoana filaminana sy fiadanana.
Ampiasao eo amin’ny fiaraha –monina sy ny asa aman-draharaha ny fenitra andrasan’Andriamanitra eo amin’ny fiainana maha Kristiana, olona manana ny Fanahy Masina, miaina amin’ny vokatry ny Fanahy Masina.
Ampiasao izay fahasoavana sy fanambinana nomen’ny Tompo ; ka zarao amin’ny hafa mba hahatonga fahasoavana sy fitahiana vaovao ; tsy ho an’ny tenanao fa izay mihaino anao ihany koa.
Talen’ny Sekoly SEDERA FJKM Amboniloha
Catégories :	Education, Sekoly Sedera, Toriteny	/ 0 Réponse / par AnjGab 19 juin 2017